Nin wax ka soo uraaya oo matag iyo labo-labo ku riday rakaabkii diyaarada Transavia… – Hagaag.com
Nin wax ka soo uraaya oo matag iyo labo-labo ku riday rakaabkii diyaarada Transavia…
Dhacdo dhif iyo naadir ah ayaa waxaa ay 30-kii bishii tagtay ee May ka dhex dhacday mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda dalka Holland laga leeyahay ee Transavia Airlines taas oo uu rakaab ka ahaa nin uraaya oo matag iyo labo-labo ku dilay rakaabka kale.
Mid ka mid ah rakaabka diyaaradda oo lagu magacaabo Piet van Haut ayaa taleefishinka dalka Bilgum-ka laga leeyahay ee VRT, u sheegay in ninka uraya uu fadhiyay mid ka mid ah kuraasta dambe ee diyaaradda, balse qarmuunkiisa uu wada qabsaday diyaaradda, isagoona sheegay in ninku u muuqday mid aan meyran ama cadayin mudo isbuucyo ah.
Diyaaradda oo hawada ku jirtay islamarkaana u kala goosheysay waddanka Nederland iyo jasiiradda Gran Canaria ayaa waxaa ay shaqaalaha diyaaradda oo qudhooda huqaacada isku celinayay ay galiyeen ninkii urayay musqusha diyaaradda si loo xakameeyo qurunkiisa, balse tallaabadaasi eyeysan waxba ka badalin xaaladda.
Diyaaradda ayaa ugu dambeyn waxa ay ku khasbanaatay in ay ku dagto garoon ku yaalla dalka Portugal si ey isaga dejiso ninkaasi qurmaya islamarkaana loo baaro xaaladiisa caafimaad.
Warbaahinta qaar ayaa dhacdadan waxa ay cinwaan uga dhigteen – HOLIDAY HORROR: Emergency landing as plane passenger’s body odour causes others to VOMIT.